laftagareen oo u digay Xildhibaannada laga soo doortay Koonfur Galbeed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	laftagareen oo u digay Xildhibaannada laga soo doortay Koonfur Galbeed
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa ku faanay in Maamulkiisa uu noqday maamulkii ugu horreeyay ee dhaqan geliya heshiiskii 17-kii September sidoo kalena fuliya heshiiskii degaan doorashada labaad.
laftagareen oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Magaalada Baydhabo ayuu sheegay in Maamulka Koonfur Galbeed uu yahay midka ugu badan ee laga soo doorto Xildhibaannada ugu badan laguna doorto ilaa 77 Xildhibaan.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaan soo hadal qaadin cabashadii ka imaaneysay kuraasta qaar oo guddiga doorashooyinka ay hakiyeen iyo musharrixiin loo diiday inay tartamaan kadib markii laga celiyay Garoonka Aadan-Cadde, iyaga oo ku wajahnaa degaannada Koonfur Galbeed.
Xildhibaannada gaaraya 77 ee laga soo doortay degaannada Koonfur Galbeed ayuu ugu baaqay inay Midnimo muujiyaan ,sidoo kalena awoodooda soo bandhigaan, isla markaana aan la kala qeybin.
laftagareen oo u digay Xildhibaannada laga soo doortay Koonfur Galbeed was last modified: March 21st, 2022 by warsan radio
Howlgal laga sameeyay Xaafado katirsan Magaalada Baraawe
Xaafada Towfiiq A oo caawa tartan aqooneedka Radio Warsan semi-finalka soo gaartey
Dagaal udhexeeya Maleeshiyaad iyo Ciidanka Puntland oo ka socda Gaalkacyo